Ezona ndawo zintle zeCydia | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | Cydia, iOS 7
Xa sifaka i-Cydia kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad xa sisenza iJailbreak, iindawo zokugcina ezininzi zifakelwe ngokungagqibekanga eziqukethe uninzi lwezicelo ezinokuthi zifakwe ngumsebenzisi oqhelekileyo kwisixhobo. IBigBoss kunye neModMyi yimithombo yolondolozo ene-99% yezicelo zeCydia ezinokuba nomdla, kodwa umhlaba weJailbreak awumi apho, kuba kukho ezinye iifonti ezininzi ezinezicelo ezizodwa oko kunokuba nomdla kwabanye benu. Sikhethe eyona ibalaseleyo.
2 URyan petrich
4 Isikhwenene Geek
Enye yezicelo ezibalulekileyo kwi-iPad. Omnye wabadlali be-multimedia abangcono kakhulu onokufumana i-iPhone kunye ne-iPad, zombini imisebenzi kunye nexabiso (simahla). Inesakhono sokongeza amajelo okusasaza, kunye nokunxibelelana neenethiwekhi, ezinje ngeTimeCapsule yakho okanye nayiphi na enye idiski ekwabelwana ngayo. Uncedisa nayiphi na ifomathi yevidiyo ongayisebenzisa. Ukuyifaka kufuneka wongeze i-repo esemthethweni kwi-Cydia: izibuko.xbmc.org/apt/ios. Unayo incwadi epheleleyo ukuqwalasela usetyenziso kwiNdaba ze-iPad.
Omnye wabaphuhlisi abaphambili beCydia. URyan Petrich unoxanduva lwee-tweaks ezaziwayo njenge-Activator okanye iRekhodi yokuBonisa. Nangona zonke izicelo zalo zihlala zihlala kwindawo ephezulu (iBigBoss kunye neModMyi), umphuhlisi usinika indawo yakhe yokugcina izinto apho abeka khona ii-betas zezicelo zakhe ngaphambi kokuba zifumaneke kwiindawo zokuphumla ezisemthethweni. Ukuba ufuna ukonwabela iinguqulelo ezintsha zezicelo zakho phambi kwakhe nabani na ongomnye, kuya kufuneka wongeze le repo ilandelayo kwiCydia: rpetri.ch/repo.
iCleaner yenye yezona zicelo zilungileyo zokususa i-junk kwifowuni yakho. Isicelo simahla kwaye ungasikhuphelela kwiBigBoss repo, kodwa ukuba ufuna uguqulelo lwe "Pro", ngezinye iindlela onokukhetha kuzo kubasebenzisi abaphambili, ungayenza kwi-repo yayo esemthethweni: exile90software.com/cydia.
Mhlawumbi ayaziwa kakuhle, kodwa iluncedo kakhulu. IParrot Geek isinika uthotho lwee-tweaks ezinokuba nomdla kwabaninzi. Inika isisombululo kwingxaki yebha yomgangatho engatshintshi umbala ngokuchanekileyo xa kusenziwa i-jailbreak: I-Status Bar Fix Ultimate. Kwakhona ezinye ezifana ne-iOS 7 Adrenaline ukukhawulezisa oopopayi, okanye iSiri Old Voice ye-iOS 7 ukubuyisa ilizwi lakudala likaSiri kwi-iOS 6. Kuya kufuneka wongeze le repo ilandelayo kwiCydia: parrotgeek.net/repo.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luphoswa yirekhodi engekho kuluhlu. Siyakukhuthaza ukuba wabelane nathi ngalo. Ndiyakukhumbuza ukuba akukho xesha apho sithetha ngee "pirate" repos, nceda.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Qwalasela i-XBMC kwi-iPad yakho (I): qhagamshela kwidiski yenethiwekhi
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Eyona ndawo iphambili yokugcina iCydia